သဒ္ဓါလှိုင်း: March 2010
ကျောင်းတက်စဉ်က… တောက်လျှောက် သင်ခဲ့ရတဲ့ စာတွေထဲမှာ `လိုအပ်သော နေရာတွင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ´ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို သတိရပြီး အတွေး တခု ၀င်လာခဲ့တယ်။
`ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ´ ဆိုတာ စာကြောင်းတကြောင်းမှာ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာ ကွက်လပ်မှာ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ စကားစုလေး ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်ပေးခြင်းပါပဲ။ ဒါမှ အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့ စာကြောင်းတကြောင်း၊ မှန်ကန်တဲ့ စာကြောင်း တကြောင်း ဖြစ်လာမှာပေါ့.။
မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာကို ဖြည့်ပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ဖြည့်ပေးလို့ မရသလို၊ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ဖြည့်ရင်လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့ကလည်း လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုပဲ မှားယွင်းစွာ ဖြည့်နေတတ်ကြသေးတယ်။ အဓိကက လိုအပ်တဲ့ နေရာ ကွက်လပ်မှာ လိုအပ်နေတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ ဖြည့်တတ်ဖို့ပဲလေ..။
ဒီလိုပါပဲ……. လူ့ဘ၀ကြီးမှာလည်း လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလို လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေမှာ....၊ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ…. အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့ အပြုအမူတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ ရုပ်ဝတ္တု ပစ္စည်းတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ အကူအညီတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ ပြုစု စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထားတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ အပြောအဆိုတွေ…၊ `မှန်ကန်တဲ့ …………. တွေ´ ကို လိုအပ်နေတဲ့ နေရာ၊ ကွက်လပ်တွေမှာ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာအလိုက် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေး တတ်ကြဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ..။
ဒါမှလည်း မှန်ကန်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့ စာကြောင်းလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့ ဘ၀ စာကြောင်းကြီး ဖြစ်လာမှာပါ..။
လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် မဖြည့်ဆည်းပဲ မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့ စာကြောင်း၊ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့ ဘ၀တွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
တချို့ ကိစ္စတွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ် နေရာမှာ ဖြည့်နေကြပြီး လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ် နေရာမှာ မဖြည့်ကြတဲ့ အတွက် လွဲချော်မှုတွေ၊ တိမ်းစောင်းမှုတွေ၊ တဦးနဲ့ တဦး နားလည်မှု လွဲတာတွေ၊ မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ကြရတာတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နစ်နာမှုတွေ၊ တဦးနဲ့ တဦး သံသယ ဖြစ်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့သွားတာတွေ၊ ခင်မင်မှု ပျက်စီးသွားတာတွေ၊ ဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်….။
လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ် နေရာမှာ မှားပြီး ဖြည့်ခဲ့ရင် စာကြောင်းတကြောင်းလုံး မှားသွားလိမ့်မယ်…။ အဲလိုပဲ ဘ၀ကြီးမှာလည်း လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ် နေရာမှာ မှားပြီး ဖြည့်ခဲ့ကြရင်….. ဘ၀ စာကြောင်း တကြောင်း မှားရာကနေ ဘ၀ စာမျက်နှာ တခုလုံး မှားသွားနိုင်တယ်လေ…။ မှားတာကို အချိန်မီ သိခဲ့ရင်တော့ ပြန်ပြင်လို့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့ ဖျက်ရာလေးတော့ ကျန်ရင် ကျန်ခဲ့နိုင်တာပေါ့…။
တချို့ကလည်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေနဲ့ ကွက်လပ် တွေကို ဖြည့်နေကြတယ်။ တချို့ ကလည်း သွယ်ဝိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေနဲ့ ကွက်လပ် တွေကို ဖြည့်နေကြရတယ်။ တချို့ ကလည်း အပြောအဆို၊ အပြုအမူ၊ စိတ်ကူး စိတ်သန်း၊ တွေနဲ့ ကွက်လပ် တွေကို ဖြည့်နေကြတယ်။
လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ အမျိုးမျိုးသော ပုံစံနဲ့ ကွက်လပ် ဖြည့်ပေး နေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို လေးစား အတုယူလျက်.....
လိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ် နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…..
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:57 PM 16 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:39 PM 15 comments:
`ရင်ထဲက အတွေးစများ´ ဆိုပြီး ခင်မင်ရတဲ့ စာရေးဖေါ် href="http://missgreenlady.mylovecafe.net မချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)ကရေးပေးဖို့ ပြောလာပါတယ်။ သတိတရနဲ့ အမှတ်တရ ရေးဖို့ ပြောတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အတွေးတွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီနဲ့ ရှင်သန်နေကြတာမလား…။
ကျမရဲ့ ရင်ထဲမှာ အတွေးတွေကလည်း ဟိုတစ…ဒီတစ နဲ့ အများသား….။
ဟိုး ခပ်ငယ်ငယ်ထဲက အတွေးလေးတွေ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဘာလေး လုပ်ချင်တယ်…၊ ဘယ်စာအုပ် ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်…၊ ဘယ်ကိုတော့ သွားလိုက်ချင်တယ်…၊ ဘာလေး စားချင်တယ်...၊ စာမေးပွဲကြီးမှာ အဆင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်မြင်ချင်တယ်… နဲ့လေ..။ အတွေး ဆိုတာကလည်း အတိုင်းအတာ မရှိ တွေးလို့ရလေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒလေးတွေ.. ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေက အတွေးထဲမှာ မျောလွင့်ပေါ့.။
တခါတရံတော့လည်း အတွေးလေးတွေ ကိုစုစီးလို့ ၊ ထုပ်ပိုးလို့..၊ အားအင် အပြည့်နဲ့ ချီတက်လို့..
တခါတရံ သပ်ရပ် သေချာစွာ စုစီး ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အတွေးတွေက ဟိုတစု ဒီတစု ပြန့်ကျဲလို့…..
ပြီးတော့ အသက်အရွယ်၊ နေရာဒေသ၊ အခြေအနေ၊ ဘ၀ အတွေ့အကြုံ ကိုလိုက်ပြီး အတွေးတွေလည်း ပြောင်းလဲ သွားတတ်ပြန်တယ်။
အသက် ကြီးလာတော့လည်း အတွေးတွေက ပြောင်းသွားပြန်ရော…၊ ဘယ်လောက်တောင် အဆုံးမရှိ ကျယ်ပြောလှတဲ့ အတွေးတွေလည်းလို့…၊
တခါတလေ ငယ်ငယ်တုန်းက အတွေးလေးတွေ ပြန်ပေါ်လာတယ်.။
ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပြန်လို့ တွေးတောမိတယ်......။
ကိုယ်ဖတ်ခဲ့ဖူးခဲ့တဲ့ စာအုပ် တွေထဲက အကြောင်းအရာတွေ၊ ဇာတ်ကောင်တွေ၊ လူနေမှု စရိုက်တွေ၊ ဘ၀ သရုပ်ဖေါ်တွေ…၊ တဦးနဲ့ တဦး သံယောဇဉ် နှောင်ကြိုးတွေ၊ တဦးအပေါ် တဦး ကိုယ်ချင်းစာ တရားတွေ၊ တဦးနဲ့ တဦး အမုန်းတရားတွေ၊ တဦးနဲ့ တဦး သစ္စာ မေတ္တာရှိပုံတွေ ပေါ့…။
(ဂျာနယ်ကျော်မမလေး) ရေးတဲ့ `သူလိုလူ´၊ `ရင်နင့်အောင်မွှေး´၊ `မုန်း၍မဟူ´၊ .........( ကျမ အရမ်းကြိုက် နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲက တချို့ပေါ့)….. ကျမအတွေးထဲမှာ ခုချိန်ထိ စိုးမိုးနေတဲ့ စာအုပ်တွေ… ခုချိန်ထိလည်း ပြန်ဖတ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ဖတ်လို့ မရိုးနိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေပေါ့။ ဒီစာအုပ်တွေ ထဲကနေ ကျမကို ကောင်းသော လမ်းညွှန်ခြင်းတွေ၊ ကောင်းသော စိတ်တွေ၊ ကောင်းသော အတွေးတွေကို တွေးနိုင်အောင်၊ မွေးမြူနိုင်အောင် မွေးဖွား ပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေထဲက အတွေးတွေပဲပေါ့….။
ဒါကြောင့် ကျမ ကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့၊ ကျမ တန်ဖိုးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ကလည်း ကျမ အတွေးထဲမှာ နေရာ တနေရာ ၀င်ယူထားတဲ့ အရာတခုပါ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတွေးဆိုတာက အကန့်အသတ် မရှိ တွေးချင် တာတွေကို တွေးလို့ ရလေတော့ တခါတခါ ကိုယ်တွေးတဲ့ အရာတခုဟာ ကောင်းတဲ့ အတွေး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ကြမှာပါ။ တခါတခါ လောဘကြီးတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ…၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတခု ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ…၊ ဒေါသဖြစ်သွားစေမဲ့ အတွေးမျိုးတွေ…၊ သူတပါးကို အနိုင်ယူ လိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ…၊ သူတပါးကို စိတ် အနှောက် အယှက် ဖြစ်စေမဲ့ အတွေးမျိုးတွေ…၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်မဲ့ အတွေးမျိုးတွေ… အဲလိုမျိုး ………..အတွေး၊ ………… အတွေး၊ တွေကို မတွေးမိဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။
ဒါကြောင့် သူတပါး အပေါ် အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကြည့်ပြီး ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားလေးနဲ့ တွေးတတ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်။
တခါတလေ ကျမ အတွက်တော့ သီချင်းလေးတွေ ထဲကလည်း အတွေးကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။
ပြီးတော့ လက်တွေ့ ကျတဲ့ အတွေးလေးတွေ တွေးဖို့လည်း လိုတယ်။ မဖြစ်နိုင်မဲ့…၊ အကျိုးမရှိမဲ့ အတွေးမျိုးတွေ တွေးမိလာရင်လည်း ပြန်ပြီး ပြောင်းလဲတွေးတော ရအောင် လုပ်ရမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း အချိန်ကုန်ပြီး အရာမရောက် ဖြစ်မှာပေါ့။
ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းတခု၊ ကိုယ်တာဝန်ယူ ထားရတဲ့ အလုပ်တခု ကိုလည်း ပိုလို့ တိုးတက်အောင်၊ အောင်မြင်မှု တွေရအောင်၊ အကျိုးရှိအောင်၊ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးကလည်း ကျမရဲ့ အတွေးထဲမှာ နေရာ ၀င်ယူထားတဲ့ အရာ တခု ဖြစ်နေပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေ၊ ကိုယ်ခင်တွယ်ရတဲ့ နေရာလေး တခု နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်ဆုံတွေ့ကြဖို့ ကလည်း ကျမရဲ့ အတွေးထဲမှာ တည်တံ့ ခိုမြဲစွာ ၀င်ရောက် နေရာယူထားတဲ့ အတွေး အစိုင်အခဲ တခုပါပဲ။
အခု လောလောဆယ်ကိုပဲ ဟိုး အနာဂတ် လမ်းဆီကို အတွေး ရောက်လို့……. အတွေးထဲမှာ အေးချမ်းတဲ့ သပ်ရပ်လှတဲ့ ခြံဝင်းလေးနဲ့ အိမ်လေး တခုထဲမှာ ကိုယ့်နဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အရာလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အတူတူ အရာရာကို နားလည်မှု တွေနဲ့ မျှဝေခံစားနိုင်မဲ့ `........´ နဲ့ အေးမြတဲ့ မေတ္တာတွေ ထုံမွမ်းထားတဲ့ အရိပ်လေးထဲမှာ ပျော်မြူးလို့ပေါ့………….!
အရာအားလုံး ကလည်း တရားမျှတမှု တွေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ တရား တွေနဲ့ လှပတဲ့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့ အစည်းကြီးတခု က၀န်းရံလို့...........။
မချောရေ… သဒ္ဓါ့ရဲ့ အတွေးတွေ တော့ရေးလိုက်ပါပြီ။ ဖတ်လို့ မကောင်းခဲ့ရင် သဒ္ဓါရဲ့ စာပေအရေးအသား ညံ့တဲ့အတွက် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးဖို့ ပြောပါရစေ။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:16 PM 14 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:55 PM 12 comments:
ဘဘ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ရဲ့ အသက်(၈၀) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
ဘဘ ဦးဝင်းတင် သက်ကျော် ရာကျော်ရှည်ပြီး အန္တရယ် ခတ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းလို့ ဘဘရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ဆန္ဒတွေ အားလုံး အမြန်ဆုံး ပြည့်ဝနိုင် ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းရင်း…..။
ဘဘရဲ့ မွေးနေ့မှာ အကျဉ်းထောင်တွင်း ရေးသားခဲ့တဲ့ `ကျားရဲ´ ကဗျာလေးကို ဂုဏ်ပြု ဖေါ်ပြ လိုက်ပါရစေ…။
တရက်ကုန်မလား။ တသက် ကုန်မလား။
အမှန်တရား တို့ဘက်မှာ ရှိတယ်။
ကာလယန္တရား တို့ဘက်မှာ ရှိတယ်။
ရှင်တော်ဘုရား တို့ဘက်မှာ ရှိတယ်။
သိကြရဲ့လား ဟား ဟား ဟား ဟား။
တိရိစ္ဆာန် ရုံက ကျားလို
ငါလည်း အဲဒီလိုပဲကွ ဟေ့။ ။
ဘဘ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါစေ...။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:29 PM4comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:38 PM 10 comments:
အော်စကာ ဆုပေးပွဲကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ကြည့်ရှုလို့ ပြီးသွားပါပြီ…….။
Burma VJ ……….
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးလှတဲ့ ကားတကားလည်း ဖြစ်တာမို့ ရစေချင်ခဲ့တာပါ။ ဇကာတင်မှာ ပါတယ်ဆိုကတည်းက ရင်ခုန်ခဲ့ရပြီး ရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။
ဒီကားသာ ရမယ်ဆို ကိုယ့်နိုင်ငံ အကြောင်း၊ အဖြစ်အပျက်တွေကို… မသိသေးတဲ့ တော်တော်များများ နိုင်ငံတွေ၊ မသိသေးတဲ့ သူတွေဟာ အများကြီး သိလာနိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ တခုခု အကျိုးရှိလာမယ်လို့လည်း ထင်မိတယ်လေ..။
ကျမလည်း Burma VJ မရတာနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး တခြား ဆုတွေတောင် ကြည့်ဖို့ အားမရှိ ဖြစ်သွားတယ်…။
ဆုမရပေမဲ့လည်း ဇကာတင်ထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ အတွက် နိုင်ငံ တော်တော်များများက လူတွေ သိသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်..။ အဲဒီအတွက်တော့ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်..။
မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဆုနဲ့ လွဲခဲ့ရပေမဲ့ တကမ္ဘာလုံးက သူတွေ တော်တော်များများ Burma VJ ဇာတ်ကားဆိုတာ ဘာကို ရိုက်ထားတာလဲ… ဘယ်လို အကြောင်းကို ရိုက်ထားတာလဲ… ဆိုတာ ကို သိသွားနိုင်မှာပါ…။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:18 PM 10 comments:
နေ့ခင်းဘက် ထမင်းစားနေရင်း… အမေ့ရဲ့လက်ရာ အရသာ ရှိရှိမစားရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျမ…….. အမေ ချက်တဲ့ ဟင်းတွေထဲက `ဂဏန်း´ ဟင်းကို တမ်းတသွားမိတယ်။ အမေ ချက်တဲ့ ဟင်းအကုန်လုံး ကြိုက်တဲ့ ကျမက ထမင်းစားရင်း အမြဲ တမ်းတမိတယ်…။
ဒီနေ့တော့… ကျမအမေ ချက်တဲ့ ဟင်းလျာတွေထဲက ကျမကြိုက်တဲ့ `ဂဏန်း´ ဟင်းကို သတိရပြီး အရင်ဆုံး ရေးမိလိုက်တာပါ။
ငယ်ငယ်ထဲက ချေးအလွန်များတဲ့ကျမ..၊ ဟိုဟင်းမစား.. ဒီဟင်းမစားတဲ့ကျမ..၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တော်တော်များများ မစားတဲ့ကျမ..၊ အသားဆိုလည်း အကုန်မစားတဲ့ကျမ..၊ ပဲဆိုလည်း မကြိုက်တဲ့ကျမ..၊ မုန့်ဆိုလည်း မစားတာများတဲ့ ကျမ…..
အဲလို မကြိုက်တာတွေ.. မစားတာတွေ များတဲ့ ကျမ… အမေနဲ့ ဝေးသွားတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော့်ကို အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားတာလေ..။ ကျမ ချေးများတိုင်း ကျမ စားချင်တာပြောတိုင်း ချက်ချင်းလို ထချက် ပေးတတ်တဲ့ အမေ… ။ ကျမအမေ ချက်တဲ့ `ဂဏန်း´ ဟင်းကို ဒီနေ့ အရမ်း တမ်းတမိနေတယ်။
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရည်လေး နဲ့ မဆလာ ခတ်ထားတဲ့ `ဂဏန်း´ ဟင်း ချက်တဲ့နေ့ဆို ကျမ အရမ်းပျော်တဲ့နေ့ပေါ့။ တခါတရံတော့ `ဂဏန်း´ ကို အကြော်မှုန့်နဲ့ ရောပြီး ကြော်. အချဉ်ရည်လေးနဲ့ လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုး ဆိုရင်လည်း ခေါင်းမဖေါ်တမ်းပေါ့…။ တခါတလေလည်း… `ဂဏန်း´ ကိုပြုတ် စိတ်ရှည်လက်ရှည် အသားထွတ်ပြီး ကြက်သွန်စိမ်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ သံပရာသီးနဲ့ သုပ်တတ်ပါတယ်။ `ဂဏန်း´ ဆိုရင် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကျမ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံး ဟင်းတခွက်ပဲပေါ့…။
ကျောင်းတက် နေတုန်းကလည်း မနက် စောစော ထဲက ကျောင်းသွားတဲ့ကျမ ညနေ ပြန်ရောက်လို့ သမီးရေ ဒီနေ့ `ဂဏန်း´ ချက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်….. ကျမမှာ ပျော်လိုက်တာ…။
အခုတော့လည်း ဗိုက်ပြည့်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီး စားကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း၊ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် စားလိုက်တာပဲလေ.။ ဟိုး……….အရင်က ချေးအလွန်များတဲ့ ကျမ ခုတော့လည်း သိပ်ပြီး ချေးထူလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာပဲ စားစား အမေ့လက်ရာ လောက်တော့ မကောင်းဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတယ်…။ ဝေးကွာသွားတော့မှ အမေ့လက်ရာက ပိုကောင်းမှန်း ပိုသိလာရတယ်…။ ပိုတမ်းတမိ လာရတယ်…။
ကျမ ကြိုက်တဲ့ အမေ့ ဟင်းလျာတွေထဲက `ဂဏန်း´ ဟင်း ကို တမ်းတရင်းနဲ့ပဲ ကျမ သိပ်မကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေနဲ့ စားနေခဲ့တယ်လေ...။
လောလောဆယ် ကျမကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေ ချက်ပေးမဲ့ အမေက အဝေးမှာ ဆိုတော့ တမ်းတမိရုံကလွဲပြီး……..!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:30 PM 11 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:34 PM 11 comments: